DVB TV – “အခြေခံသင်ရိုးနဲ့ သင်ကြားရေးစနစ် ဘယ်က စပြောင်းမလဲ” “လက်ရှိပညာရေးဌာနကနေ အရင် ကျမတို့တွေပါခဲ့တဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်တတ်တဲ့ စနစ်ကို ဦးစားပေး သင်ပေးမယ့် သင်ရိုးကို မဖျက်ဘဲ ဆက်သုံးမယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲအတွက် အင်မတန်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်ရိုး စာအုပ်တွေကိုလည်း ပုဂ္ဂလိကကို ရိုက်နှိပ် ရောင်းချခွင့် မပေးဘဲ နိုင်ငံတော်က ပြန်ရောင်းချပေးသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်” ဒေါက်တာ ရင်ရင်နွယ် – သမ္မတပညာရေး အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၂၀၁၄-၂၀၁၆ မတ်)၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဝင်ဟောင်း “ပညာရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့ စကားတွေ ကြားရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး။ ဆရာ/ဆရာမတွေကို စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ရင် အဝေးကို ပို့မယ်ဆိုတော့ အဝေးက ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နေကြတဲ့ လူတွေကရော ကျနော်တို့ ကလေးတွေ လူတွေပဲ …Read more »
DVB TV – “ကြိုးနီစနစ်ကို ဘယ်လို လျော့ချမလဲ”
1151 February 12, 2017
DVB TV – “ကြိုးနီစနစ်ကို ဘယ်လို လျော့ချမလဲ” “အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း လူမှန်နေရာမှန်နဲ့ ထိုက်တန်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့လိုတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တွေဖြစ်နေတယ်. သူတို့တွေကသာ ကြိုးနီစနစ်ကို ဖြိုချဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်” ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်း – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း “၀န်ကြီးချုပ်တွေချပေးတဲ့ ပေါ်လစီတွေ အမိန့်တွေကို ထွေအုပ်က မောင်းနှင်ရတာဖြစ်တယ်” ဦးထွန်းထွန်း – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အရာရှိဟောင်း၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် “ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရေးရာလုပ်သူတွေမှာက သူတို့မှာလည်း သူတို့လိုက်နာရမယ့် ချမှတ်ထားတဲ့ ဂိုက်လိုင်းတွေရှိတယ်။ ကြိုးနီစနစ်ပြင်ဖို့ဆိုရင် မူဝါဒပိုင်းထိ သွားကြည့်ဖို့ လိုမယ်” ဦးကျော်စွာဆွေ – တကောင်းအင်စတီကျူ့၊ မူဝါဒရေးရာအကြံပေး “ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း အဖက်ဖက်က သီလမလုံသေးဘဲနဲ့ ကြိုးနီစနစ်လျှော့ချဖို့ ပြောနေတာလည်း မဟုတ်သေးဘူး တချို့ ကြိုးနီစနစ်တွေက ရှိကို ရှိသင့်တယ်” ဦးဘာဘာချို …Read more »
DVB TV – “YBS က ပြည်သူတွေကို အဆင်ပြေစေလား”
1401 February 5, 2017
DVB TV – “YBS က ပြည်သူတွေကို အဆင်ပြေစေလား” “မ.ထ.သ စနစ်ကနေ ၀ိုင်ဘီအက်စ် စနစ်ပြောင်းတာ မမှားဘူး ပြင်ဆင်မှုတွေ အားနည်းခဲ့တာ မှားတယ်” ဦးမင်းဇင်ဝင်း – အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း “တလကြာရင် ပြန်စိစစ်မယ်။ လမ်းကြောင်း ဘယ်နေရာ ထားရမယ်ဆိုတာတွေ ပြန်စိစစ်ဖို့ရှိမယ်။ ပင်မလမ်းကြောင်းကြီးကတော့ သွားနေမယ်လေ ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေ ဘယ်လို ချိတ်မလဲ ဆိုတာမျိုးက အစ လုပ်မှာပါ။ နောက် ကျနော်တို့ဆီက အခြေခံအဆောက်အဦပိုင်း အရမ်းအားနည်းခဲ့တယ် ခေတ်အဆက်ဆက်လည်း ထောက်ပြခဲ့တယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်လည်း မလုပ်ခဲ့ဘူး အခုဒါတွေအားလုံး လာဆောင့်ပြီးဖြစ်တာပဲ” ဦးအောင်မြင့် – အဖွဲ့ဝင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ “ကျနော်တို့မှာ ထွက်ပေါက်တခုရှိတယ်။ မြို့ ၄ …Read more »
DVB TV – “မြန်မာစာပေလောက ပြန်လည် ဦးမော့လာနိုင်ပါ့မလား”
1181 January 29, 2017
DVB TV – “မြန်မာစာပေလောက ပြန်လည် ဦးမော့လာနိုင်ပါ့မလား” “မူလတန်းကျောင်းတွေမှာကလည်း ကလေးတွေဖတ်ဖို့ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံကောက်တာ မရှိဘူး. တခြားအရာတွေဝယ်ဖို့ကျ ပိုက်ဆံကောက်ကြတယ်” ဦးလှိုင်တင့် – ပညာရေးဝန်ထမ်းတဦး “၂၀၁၂ ကတည်းက စာပေစိစစ်ရေးမရှိတော့ဘူးဗျာ အခု ၂၀၁၇ ရောက်နေပြီ ဆန်းသစ်တဲ့ဖန်တီးမှုမျိုး စာအုပ်ထုတ်ဝေမှုမျိုးတွေ ဘာမှ ထွက်လာတာ မရှိသေးဘူး” မြေမှုန်လွင် – စာရေးဆရာ “စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ စာအုပ်ဈေးကွက်မှာလည်း နေရာရဖို့က လိုသေးတာကိုး စာအုပ်ဈေးကွက်က ပျက်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆို ထိထိရောက်ရောက် မဖြန့်နိုင်ဘူး အမှန်ဆို ရွာတွေ ကျေးလက်တွေကိုလည်း စာအုပ်တွေ ရောက်ဖို့က မဖြစ်မနေလိုပါတယ်” စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) – စာရေးဆရာ “စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေပျောက်သွားတဲ့အတွက် တချို့ စာပေလိုင်းလေးတွေ ပျောက်သွားတယ်။ စာအုပ်တအုပ် ရောင်းထွက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ရမှာက …Read more »
DVB TV – ‘မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘယ်ကို ဦးတည်နေလဲ’
1651 January 22, 2017
DVB TV – ‘မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘယ်ကို ဦးတည်နေလဲ’ “လူပြိန်းကြိုက်တွေရေးသားတာ၊ အညှီအဟောက်သတင်းတွေပဲ ရေးသားတာမျိုးတွေလည်း ရှိနေမှာပဲ ခေတ်အဆက်ဆက်ကလည်းရှိခဲ့တာပဲ ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ မီဒီယာကြီးတခုလုံးကို အဲဒီပုံရိပ်တွေနဲ့ သိမ်းကျုံးပြောလို့မရဘူး။ သတင်းသမားတွေမှာ ကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းတွေမှာ လိုအပ်နေတာမှန်တယ် ကျွမ်းကျင်မှုလိုနေတာနဲ့ပဲ လွတ်လပ်ခွင့်မပေးတာဟာ မမျှတဘူး” ဦးမြင့်ကျော် – အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်လစ်များကွန်ရက် “ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အရင်တုန်းကတည်း ရှိခဲ့တဲ့ ၀ါဒဖြန့်မီဒီယာဆိုတာထက် မပိုဘူး။ အဲဒီက ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရမယ် reform လုပ်မှရမယ်” ဒေါ်မွန်မွန်မြတ် – ဆောင်းပါးရှင် “ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာဆို စာအုပ်ပွဲတော်တွေ ကျင်းပလာတာ၊ ရန်ကုန်စာအုပ်လမ်းတွေပေါ်လာတာ တိုးတက်မှုလေးတွေ ရှိပါတယ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတွေရဲ့ ကဏ္ဍလည်း အများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစာပေတွေဆိုရင်လည်း တိုးတက်ထုတ်ဝေလာနိုင်တာ တွေ့ရတယ်လေ။ အသံလွှင့်မီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်း တိုးတက်ဖို့ကတော့ အများကြီး အားထုတ်ရဦးမယ်” ဦးတင့်ဆွေ …Read more »
DVB TV – “နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ လူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လို မြှင့်တင်မလဲ”
904 January 15, 2017
DVB TV – “နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ လူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လို မြှင့်တင်မလဲ” “နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတာတွေထဲမှာ တချို့က ပညာရှင်ဆန်တာပေါ့နော် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ တက်နေကျ လူငယ်တွေကတော့ နားလည်တယ်။ ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပြည်နယ်က လူတွေဆို သူဆိုလိုတဲ့ ဦးဆောင်မှုနေရာချည်းပဲ ယူမနေဘဲ နောက်လိုက်ကောင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတာမျိုးတွေကျ ရုတ်တရက် နားမလည်လိုက်ဘူးပေါ့နော်” (နန်းမွေဆိုင် – ရှမ်းမြောက်လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်မူဝါဒဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့) “ကျနော်တို့ဆီမှာက အသက် ၆၀ နားထိကို လူငယ်ဖြစ်နေတယ်. အသက်ငယ်တယ်ထင်ရတဲ့ လူတွေဆို နှိမ်ထားချင်တာမျိုးတွေ့ရတယ်။ တချို့ဆို ‘သား’ တို့ဘာတို့ အသုံးအနှုန်းတွေခေါ်တယ် ရင်းနှီးတယ်လို့ထင်ရတဲ့ အသုံးအနှုန်းပေမယ့် ဒါက လူငယ်တွေကို ငယ်နေလို့ ဖိလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့” (ဦးဇေယျသူ – ဒုအယ်ဒီတာချုပ်၊ The Voice အပတ်စဉ်/နေ့စဉ် သတင်းစာဂျာနယ်) “ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမတက်ရဘဲ …Read more »
DVB TV – “အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ”
1323 December 18, 2016
DVB TV – “အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ” “ချင်းပြည်နယ်မှာက စဉ်ဆက်မပြတ် ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်နေတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တယ်။ လူ ၁၀၀ မှာ ၇၂ ယောက်က ဆင်းရဲနေတယ်။ ရေခံမြေခံ အနေအထားကလည်း ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်စေသလိုပဲ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်လာရင်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်သွားတဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်နေတယ်” ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင် – စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး (ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့) “တပ်မတော်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟိုကနေပဲ ကြီးစိုးနေမှုက ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ဆောင်နေမှုတွေကို တအား နှောင့်နှေးနေစေမှာပဲ။ အောက်ခြေကလာတဲ့ လိုအပ်ချက်ထောက်ပြမှုတွေက ပိုထိရောက်တယ်” မိုင်ချယ်ရီဇာဟောင် – တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၂၊ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ “လက်ရှိဖြစ်နေတာက တောင်သူတွေဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် ရွာတရွာကနေ ပြောင်းရွှေ့လာရင် လုပ်စားစရာ တောင်ယာမရှိဘူး။ ရွာပဲပြောင်းခိုင်းတယ် လုပ်စားစရာ …Read more »
DVB TV – “၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘယ်အချိန်ပြင်မှာလဲ?”
1654 December 11, 2016
DVB TV – “၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘယ်အချိန်ပြင်မှာလဲ?” “ခန့်ထားခံရတဲ့သူနဲ့ နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူထားသူတွေ ကိစ္စ။ ခန့်ထားခံရသူက နိုင်ငံရေးတာဝန်ရှိသူကို ၀င်စွက်လို့မရဘူး။ ဒီမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ကာချုပ်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန နောက်တခါ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို ခန့်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အတွေ့အကြုံအရဆို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကာချုပ်အထက်က ဖြစ်ရမယ်။ အခုက ကာချုပ်အောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီပြဌာန်းချက်တွေကိုက မှန်ကန်ခြင်း မရှိဘူး” ဦးအောင်သန်းစိုး – ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး “ကျနော်တို့နိုင်ငံက လိုက်နာရမှာ တည်ရှိနေဆဲ ဥပဒေတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေ လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်။ အစားထိုးမယ်ဆိုလည်း ပုဒ်မ ၄၃၃ မှာ ပါပြီးသားပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တရပ်ရပ်ကို ပြင်ဆင်လိုပါက သတ်မှတ်ချက်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ပဲပါတယ်. အဲအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရင် ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး” ဦးလှသိန်း – ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ …Read more »
DVB TV – “အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ”
1513 December 4, 2016
DVB TV – “အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ” “တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးမှာ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ခွာနေတယ်လို့တော့ မမြင်ပါဘူး များလာတယ်။ ဒါလည်း အကြောင်းရှိတယ် စစ်တလင်းကျယ်လေ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကျဉ်းလေဖြစ်လာတယ်” ဦးအေးမောင်ကျော် – စာရေးဆရာ၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ “အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးခေတ်စားလာတာက တယောက်ကို တယောက် အပြုတ်တိုက်ရေးမလုပ်တော့ဘဲ ညှိနှိုင်းရေးပဲ သွားကြဖို့ ပြောလာတာပါ။ တဖွဲ့ဖွဲ့က အပေါ်စီးယူတာ၊ အသာစီးယူတာတွေ ရှိရင် ပြေလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ခွန်မြင့်ထွန်း – ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် “လက်နက်ကိုင်တယ်ဆိုတာ သူ့လုံခြုံရေးသူ စိတ်မချရသေးလို့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လုံခြုံရေးအစီအမံ ဖန်တီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပိုနီးစပ်မယ်လို့ မြင်တယ်” နိုင်ဥဿာ – မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) “အခုကြားနေရတဲ့ သတင်းတခုရှိတယ်. MNDA …Read more »